जसले भ्यालेन्टाइनलाई आफ्नो बनाए - प्रसंग - साप्ताहिक
जसले भ्यालेन्टाइनलाई आफ्नो बनाए
तपाईंको विवाह प्रेम कि मागी? केही वर्षअघि सम्म विवाह गर्ने अधिकांश जोडीसँग यो जिज्ञासा राख्दा उनीहरूको जवाफ मिश्रित हुन्थ्यो। अहिले परिस्थिती परिवर्तन भएको छ। पछिल्लो समय वैवाहिक जीवनमा बाँधिने अधिकांश जोडीले प्रेम विवाह नै गरेका हुन्छन्। नेपालमा भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउन थालिएसंगै प्रेम विवाहको ट्रेन्ड पनि झांगिएको छ। सर्वसाधारणदेखि सेलिब्रेटिसम्मले अचेल प्रेम विवाह नै रोज्न थालेका छन्।
गत वर्षको फागुन महिनादेखि यो माघ महिनासम्म झन्डै एक दर्जन नेपाली सेलिब्रेटीले प्रेम विवाह नै रोजे। नायिका गरिमा पन्तदेखि उषा पौडेल सम्म अनि हास्य अभिनेता सुरज चापागाइंदेखि गायक तथा भिजे सोनाम पाख्रिनसम्मले प्रेम विवाह नै गरेका छन्।
भिडियो जक्की (भिजे) तथा संगीतकर्मी सोनाम पाख्रिन यसै साता वैवाहिक जीवनमा बाँधिए। सोनामले चापागाउँ, ललितपुरकी सुजाता विष्टसँग विवाह गरेका हुन्। लामो समयदेखि एक–अर्काको प्रेममा रहेका सोनाम तथा सुजाताले गत सोमबार दिएको विवाह भोजमा संगीतकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो।
‘मेरी बास्सै’ मार्फत बान्द्रेको उपनामले लोकप्रिय झापाली हास्य अभिनेता सुरज चापागाईंले पनि हालसालै चण्डोल, काठमाडौंकी उषा तिमिल्सिनालसँग प्रेम विवाह गरे। उषा पेसाले शिक्षिका हुन्। झन्डै एक वर्ष लामो प्रेमसम्बन्धलाई उनीहरूले विवाहको रूप दिएका हुन्।
अभिनेता हरिवंश आचार्य यही वर्ष पहिलो पटक ससुरा भए। आचार्यका जेठा छोरा त्रिलोक आचार्यले अमेरिकामै विवाह गरे। त्रिलोकले अमेरिकी युवतीलाई जीवनसाथी बनाएका हुन्। उनले पनि प्रेम विवाह नै गरेका हुन्। जेठा छोरा त्रिलोककी दुलही भित्र्याएको केही समयपछि नै हरिवंशले कान्छा छोरा मोहित आचार्यको पनि विवाहको टुंगो लगाएका छन्। मोहितले पनौतीकी बिन्दु थापासँग इन्गेजमेन्ट गरिसकेका छन्। उनीहरूको विवाह आगामी असार महिनामा हुने बताइन्छ। मोहित भने मागी विवाह गर्दैछन्।
ग्ल्यामर फोटोग्राफर अभिनव कसजूले पनि यही वर्ष वैवाहिक जीवन प्रारम्भ गरे। गत असार २९ गते अभिनवले विजिता विजुक्छेसँग स्वयंवर गरे भने साउन १५ तथा १७ गते उनीहरूको वैवाहिक समारोह सम्पन्न भएको थियो। अभिनव र विजिताले पनि प्रेम विवाह गरेका हुन्।
अभिनेत्री गरिमा पन्त पनि यही वर्ष विवाह बन्धनमा बाँधिइन्। गत वैशाखमा फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै गरिमाले आफू विवाहवन्धनमा बाँधिएको घोषणा गरेकी छिन्। गरिमाले बेल्जियममा बसोबास गर्ने नेपाली व्यवसायी हरि शर्मालाई जीवन साथी बनाएकी हुन्। गरिमा विगत केही वर्षदेखि हरिसँगको प्रेममा थिइन्। गरिमाका श्रीमान् हरिको भने यो दोस्रो विवाह हो।
अभिनेत्री उषा पौडेल तथा अभिनेता सुधांशु जोशीले पनि यही वर्ष विवाह गरे। उनीहरूले अमेरिकामा प्रेम विवाह गरेका हुन्। उनीहरू लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। नायक सुधांशु जोशीको यो दोस्रो विवाह हो। पहिलो विवाह असफल भएपछि उनी ८ वर्षदेखि एक्लो जीवन बिताइरहेका थिए। उषा पौडेलको भने यो पहिलो विवाह हो।
फुटबल खेलाडी असिमजंग कार्की एवं पौडी तथा ट्राइथोलन खेलाडी सोनिरा विष्ट पनि यही वर्ष विवाह बन्धनमा बाँधिए। भक्तपुरका असिम तथा ललितपुरकी सोनिराबीच एक वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो। सन् २०१४ को इन्चोन एसियन खेलकुदमा सहभागी हुँदा चिनजान भएका उनीहरू पछिल्लो एक वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रमाइरहेका थिए।
निर्देशक निश्चल बस्नेत तथा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले विवाह गरेको ठ्याक्कै एक वर्ष भयो। अघिल्लो फागुनमा उनीहरूले परम्परागत विवाह गरेका थिए। विवाह भएको केही समयअघि मात्र एक–अर्कासँग भेटेका उनीहरूले परिवारका सदस्यहरूको सहमतिमा हिन्दू परम्पराअनुसार एक–अर्कालाई जीवन साथी बनाएका हुन्। ३४ वर्षीय निश्चलले आफूभन्दा भन्डै १४ वर्ष कान्छी २० वर्षीया स्वस्तिमासँग लगनगाँठो कसेका छन्।
मिस नेपाल २००९ जेनिशा मोक्तान तथा युवा व्यवसायी दिकेश मल्होत्रा गत वर्ष फागुनमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिए। मोडलको परिचय बनाएकी जेनिशाले आफ्नो जीवनसाथीका रूपमा युवा उद्योगी मल्होत्रालाई रोजेपछि उनीहरू दाम्पत्य जीवनमा बाँधिएका हुन्। उनीहरूले करिब एक साता लगाएर वैवाहिक समारोह सम्पन्न गरेका थिए।
‘हामीले एक–अर्कालाई ‘सोलमेट’ मानेपछि सँगै जीवन जिउने सपना देखेका थियौं,’ जेनिशाले विवाहभन्दा केही अघि साप्ताहिकसँग भनेकी थिइन्— ‘हामी एकदमै खुसी छौं, हाम्रो सपना पूरा भएको छ।’ जेनिशाको कुरामा सही थाप्दै दिकेशले थपेका थिए– ‘हामीले अत्यन्तै निकट मित्रका रूपमा थुप्रै वर्षदेखि एक–अर्कालाई बुझेका छौं, एक–अर्काको परिपूरक भएकैले विवाह गर्ने निर्णय लिएका हौं।’ करिव साढे पाँच वर्षको अफेयरपछि यो जोडी विवाह बन्धनमा बाँधिएको हो।
आफ्नो भिडियोमा आफैं
आफ्नो बिहेका लागि मेरी मम्मीसँग भेट
अभिनेत्रीहरूको तीज भाद्र ७, २०७४
कलाकारहरू कहाँ, के गर्दैछन्? भाद्र १, २०७४
घटेको हो त हास्य क्रेज ? श्रावण २४, २०७४
सामाजिक पँधेरोमा बवन्डर श्रावण १४, २०७४